Maalgalinta dahabka ee laxiriira sicir bararka iyo keenista lacagta | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Casudi casals | | Bolsa, Siyaasadda lacagta
Inta badan tusmooyinka kaydka adduunka oo dhan way soo kabteen gebi ahaan ama qayb ahaan, qaarkoodna waxay dhigayaan diiwaanno dhow. Sababaha salka ah ee inoo imanaya waa saadaasha guud ee kobaca wax soo saarka guud ee waddamada, oo ay ku jiraan tallaalka, soo kabashada degdegga ah, in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya waddammada uu soo hagaagayo, iyo sidaas oo ah liis dheer. Si kastaba ha noqotee, miyey joogsatay inay faa'iido hesho oo waa waqtigii lagu maalgashan lahaa dahabkii hore?
Mid ka mid ah aasaaska ugu caansan ee aan ka haysto dahabka waa kaas waa meel fiican oo laga magan galo sicir bararka. In kasta oo xayiraaduhu jireen, maalgashadayaal badan iyo maareeyayaal ayaa aragti ka yeeshay sicir bararka mustaqbalka soo socda oo waxay sharraxaad ka bixiyeen kororka dahabka. Qaarkood way sii wadaan inay difaacaan, inkasta oo uu in ka badan 10% ka lumiyay heerkiisii ​​sareeyay. Ma khaldan yihiin mise waa dhacdo waqti dheer qaadan doonta in la yimaado? Si kastaba ha noqotee, haysashada shaashadda gacantaada marna fikrad xun, oo waxaan aragnay dhaqdhaqaaqyo ku wajahan dahab oo ay wadaan maal gashadayaal aan wada ognahay iyo xitaa qaar aan waligood maalgashi ku samayn lahayn.
1 Maalgelinta dahabka, dhibaatada soo noqoshada
2 Dahab iyo sicir barar
2.1 Maxaa dhacaya markii qiimaha dahabka loo jaangooyo sicir bararka?
2.2 Gabagabada dahabka ee sicir bararka
3 Miisaaniyadda Lacageed Maxay tahay doorka aad horumariso si aad ugu maal gasho dahabka?
3.1 Saamiga Dahabka ee Saldhigga Lacagta
3.2 Gabagabo dahab ah oo leh saldhig lacageed
4 Gabagabada kama dambaysta ah haddii ay tahay ikhtiyaar wanaagsan in lagu maalgaliyo dahab
Maalgelinta dahabka, dhibaatada soo noqoshada
Marar badan waxaan maqlay dad badan oo dahabka la xidhiidhiya sicir bararka. Dadka qaarkiis waxay ku eedeeyaan dhaqankooda suuqa. Waxaa jira kuwa difaacaya in dahabku u dhaqmayo si ka soo horjeedka qiimeynta tusmada doolarka. Isku soo wada duuboo, inkasta oo aysan taasi si sax ah u ahayn haba yaraatee, runtu waxay tahay in dadkaas aan maqlay oo dhami ay ahaayeen kuwo saxan oo aan isku wakhti ahayn.
Gabagabada kaliya ee aan shakhsi ahaan sawiri karo waa taas dhammaan duruufaha horay loo sharraxay waxay isugu yimaadaan isla waqtigaas. Marka dahabka, oo wajahay xilliyo hubin la'aan, dhibaato, ama sicir barar u eg (laakiin had iyo jeer maahan) in la arko sicirkeeda oo la beddelay. Xigasho taasi waxay ku xirnaan doontaa xiisaha birtan maalgashadayaasha, hay'adaha iyo bangiyada.
Si tan loo sameeyo, waxaan arki doonnaa arrimaha ugu waaweyn ee saamaynta ku yeelan kara qiimahaaga.
Dahab iyo sicir barar
Kahor intaanan gelin shaxda dahabka ah, waxaan doonayay inaan ahmiyada koowaad siiyo sicir bararka ka jira Mareykanka. Sida aan aragno, waxaan leenahay dhinacyo laxiriira. Lambarradan soo socdaa waa inay maanka ku hayaan.
Diidmada Sanduuqa Jaalaha ah. Tobannaankii sano ee 20aad iyo 30aad. Intii u dhexeeysay, waxaannu daawan karnaa sida xukunku u muuqday.
Sicir barar ka weyn 10%. Sanduuqyada cagaaran. Waxaan haysannaa 3 xilli. Isagoo xoogga saaraya muddooyinka tan iyo bilowgii iyo dhammaadka sannadaha oo leh meelaha ugu sarreeya.
Sicir barar ka yar 5%. Waxaan leenahay seddex dooxooyin waaweyn. Midka ugu horreeya iyaga ayaa iska leh qodobka koowaad, ee ah Diidmada.
Maxaa dhacaya markii qiimaha dahabka loo jaangooyo sicir bararka?
Xog laga helay macrotrends.net
Sicir bararka awgiis, qiimayaasha hantida oo dhan waxay u muuqdaan inay sii kordhayaan mustaqbalka fog. Dahabku maahan mid ka reeban, waana sababtaas darteed jaantuskan kore waxaa lagu hagaajiyay sicir bararka. Taasi waa, muxuu yahay qiimaha ounce dahab ah waagii hore marka loo eego qiimaha dollarka maanta. Haddaan hadda eegno jaantuska caadiga ah ee dahabka (looma bandhigin si aan loo badin), waxaan arki lahayn dib-u-qiimeyn ballaaran. Waxaan qiimeyneynaa qodobbada ugu muhiimsan ee ku saabsan.
Muddooyinka sicir bararka. Muddooyinka kahor musalafnimada nidaamka lagu heshiiyey Bretton Woods, dahabku wuxuu muujinayaa hoos u dhac ku yimid qiimihiisii ​​asalka ahaa markii uu jiray sicir barar. Si kastaba ha noqotee, Nidaam dhaqaale oo sicirka sarrifka isbeddelaya, sicir bararku wuxuu la jaan qaadayaa kor u kaca qiimaha dahabka. Sidoo kale waa in lagu daraa in nidaamka Bretton Woods uu jabiyay daabacaadda ballaaran ee doollarka si loogu maalgeliyo Dagaalkii Vietnam. Ka dib dalabyadii ka yimid Faransiiska iyo Ingiriiska oo ahaa in doolarkooda keydka loo badalo dahab taas oo hoos u dhigtay keydka dahabka Mareykanka Macnaha guud, oo ah wax walba, wuu ka duwanaa kan hadda jira.
Muddooyinka isdifaaca. Muddooyinkan dahabku wuu kordhay qiimihiisa. Si kastaba ha noqotee, ka dib dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay burburka Lehman Brothers waxaa jiray muddo gaaban oo ay u muuqatay in dahsoon oo dahabku uu ku kordhay qiime ahaan. Si kastaba ha noqotee, sababta kor u kacaani waa mid macquul ah oo macquul ah in ay dhiirrigelisay xiisadda dhaqaale iyo kalsooni darrada weyn ee nidaamka bangiyada marka loo eego dib u dhaca laftiisa.
Muddooyinka sicir bararka dhexdhexaadka ah. Kadib markii ay qarxeen xumbada dhibcaha-dhibic, dahabku sifiican ayuu uqabtay, hase yeeshe sifiican ugama uusan muuqan sanadihii hore Sababtan ayaa laga yaabaa inay suurtogal tahay in lagu dhiirrigeliyo raadinta dahabka sidii hanti badbaado oo badbaado leh.
Gabagabada dahabka ee sicir bararka
Haddii qiimaha dahabku uu kordho boqolkiiba marka loo eego sicir-bararka, waa faa'iido in la maal-galiyo (bayaankan "oo leh jilayaal"!). In kasta oo ay run tahay in keli ahaan hoy ahaan ay ku wanaagsan tahay mustaqbalka fog, hamiga maalgaliye waxaa laga yaabaa inaanay sidaa u fogeyn waqtiga. Sidaa darteed, maalgashiga dahabka inta lagu jiro xilliyada isbeddelada adag waa ikhtiyaar wanaagsan. Haddii aad sidoo kale fahamto goorta isbeddeladan ay dhacayaan oo aad horay u maalgashatay, soo celinta la heli karo ayaa ah mid aad loogu qanco.
Gabagabada ayaa ah in wajiga xilliyada sicir bararku aad u sarreeyo, dahabku uu noqon karo gabbaad wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer, macnaha guud ee dhaqaalaha adduunku ku yaal ayaa doorbidaya dan weyn. Xilligan Nama wajahayno xaalado sicir barar oo sarreeya, laakiin waxaan la kulannaa xaalad dhaqaale oo aan la saadaalin karin ee saameynta ugu dambeysa ee dhibaatada jirta.
Saamiga Dahabka ah ee Dahabka ah
Miisaaniyadda Lacageed Maxay tahay doorka aad horumariso si aad ugu maal gasho dahabka?
Xog laga helay fred.stlouisfed.org
Lacagta la soo siinayo, ee dhaqaalaha, waa lacagta guud ee la heli karo si loogu iibsado alaabada, adeegyada ama dammaanadaha keydka. Waxaa lagu helaa iyada oo lagu darayo lacagta caddaanka ah ee ku jirta gacanta dadweynaha iyada oo aan la soo gelin bangiyada (biilasha iyo shilimaadka) iyo keydka bangiga. Wadarta labadan shay ayaa ah saldhiga lacageed (gadaal ayaan ka hadli doonaa). Saldhigga Lacageed ee lagu dhufto isku dhufashada lacagta waa Lacagta Lacagta.
Garaafka koowaad waxaad ku arki doontaa sida Miisaaniyadda Lacagtu wax badan u kordhay. Bishii Janaayo 2020 waxay ahayd 15 tiriliyan oo doolar, hadda tiradaani waxay korortay waxayna gaadhay 3 tiriliyan doolar. Miisaaniyadda Lacagta ee doolarka ayaa kordhay 3 tiriliyan sanadka 8, taas oo ah, 2020%!
Iyadoo lagu saleynayo xiriirka sicir bararka, siyaasadda monetarist-ku waxay qabtaa inuu jiro xiriir ka dhexeeya xaddiga lacagta wareegaya iyo qiimaha dhaqaalaha. Dhinaca kale, aragtida Keynesian waxay leedahay ma jiro xiriir ka dhexeeya sicir bararka iyo lacag bixinta, gaar ahaan marka dhaqaaluhu kobco. Markaa isku dayga inaan helno wax kale, aan eegno xiriirka ka dhexeeya salka lacagta.
Saamiga Dahabka ee Saldhigga Lacagta
Xogta laga helay fred.stlouisfed.org
Waan arki karnaa sida Saldhigga Lacagta ayaa soo maray koror aad u badan. Sababtoo ah siyaasadaha "lacagta helikobtar"
Markaad aragto jaantuskan waxaad ogtahay inay adagtahay inaad sidan kusocoto mudo dheer isbadal la'aan. Ama waxaa laga yaabaa in xitaa waxyaabo ka sii yaab badan la arkay. Sababtan awgeed, haddii aysan jirin wax kor u kaca ah oo ka dib marka la awoodi waayo in wax badan laga helo xiriirka dahabka ee sicir-bararka, waxaa laga yaabaa in raadinta xiriir lala yeesho saldhigga lacageed aysan sidaas u fogeyn. (Anagoo maanka ku hayna inaannaan xiriir ka dhexayn karin sicir-bararka iyo sicirka lacagta, sida uu ku dooday Keynes).
Jaantuska soo socda ayaa la filayaa inuu muujiyo. Waxay ina tusaysaa saamiga u dhexeeya dahabka iyo saldhigga lacagta.
Jaantus laga helay macrotrends.net
Dhowr qodob ayaa la iftiimin karaa:
Sida la arki karo, daabacaadda lacagta badani waxay sababtay saamiga inuu hoos u dhaco si aad ah inta udhaxeysa 1960 iyo 1970 (Dagaalkii Fiyatnaam dartiis, sidii horay looga hadlay).
Sicir bararku wuxuu keenay qiimaha dahabka sanadaha soo socda, laakiin Hubaal la'aan ayaa sii waday waxayna sii caawisay kor u kaca qiimaha, oo gaarey meelaha ugu sarreeya ee saamiga. (Waxay noqon laheyd lama huraan in la isku dhufto x10 iyo ka badan qiimaha hadda ee dahabka si loo helo saamiga 5 sida ay ku timid).
Kordhinta sicirka lacagta tan iyo markii dhibaatada dhaqaale ay soo ifbaxday (iyo baxsad) hoos u dhac ku yimid saamiga aan horay loo arag.
Waqtigan xaadirka ah, ku iibso saamiga sare ee dahabka saldhigga lacageed, faa iido badan ayay ahayd. Si la mid ah, maalgashiga dahabka ayaa ka hooseeya saamiga, faa'iidooyinka mustaqbalka weyn ee ay bixisay.
Gabagabo dahab ah oo leh saldhig lacageed
Kaliya haddii dahabku dib uga qiimeeyo heerarka hadda jira si uu ula mid noqdo saldhigga lacageed ee hadda jira, wadada kore ee ay lahaan laheyd waxay ka badnaan laheyd 100%. Haddii Saamigu u janjeero 1, ama cabsi sicir barar awgeed, xiisado xoog leh oo ay weheliso daqiiqado hubanti la'aan, iwm., Waxaan iska hor imaan doonnaa xaalad dahab lagu qiimeeyay. Waa wax iska hor imanaya tan iyo markii sicirkiisu uu gaadhay heerkii ugu sarreeyay abid dhowaan, laakiin sidoo kale saldhigga lacageed.
Gabagabada kama dambaysta ah haddii ay tahay ikhtiyaar wanaagsan in lagu maalgaliyo dahab
Ma jiro hal nooc oo cabbir ah oo lagu ogaanayo waqtiga saxda ah ee lagu maalgashan karo dahabka. Si kastaba ha noqotee, waxaan awoodnay inaan ogaanno sida sicir bararka, salka lacageed iyo dhibaatooyinka ayaa saameynaya ku jira. Macnaha guud, oo kooban. Intaa waxaa dheer, dhaqaaluhu waa dabeecad, maalgashade wanaagsan waa inuu hadda isweydiiyo halka aan joogno. Sidoo kale inay tahay tan ugu badan ee dhici karta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Bolsa » Maalgalinta dahabka ee laxiriira sicir bararka iyo bixinta lacagta
Bayaanka dhaxalka: waxa uu yahay, sida ay tahay in loo sameeyo, imisa qiimahiisa